SKY LARK Automobile
လူကြီးမင်း ကား ၀ယ်ချင် ၊ ရောင်းချင်ရင် ဆီကုန်ခံ ၊ အချိန်ကုန်ခံပြီး ကားပွဲစားတန်းသွားရတဲ့ ဒုက္ခ ၊ နေပူထဲမှာ ပွဲစားကို လိုက်ရှာရတဲ့ ဒုက္ခ ၊ ပွဲစားက လောင်းကြေးနဲ့ 
စနူကာထိုးနေရင် ပွဲပြီးအောင် ဆောင့်ရတဲ့ ဒုက္ခ ၊ ပြီးရင် ပွဲစားက လဖ္ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြောရအောင် ဆိုလို့ ပိုက်ဆံက ကုန်အုံးမယ် ။ ကိုယ်ကနားမလည်လို့ပွဲစားတွေ
လိမ်တာ ညှာတာ ခံရ အုန်းမယ် ။ ပွဲစားတွေ အဆင့်ဆင့်နဲ့ကားဝယ်ရ ရောင်းရလို့ ပွဲခအဝေ မတည့်လို့ပွဲပျက်တာတို့၊ ပွဲစားတွေရန်ထဲ ကိုယ်ဝင်ပါရတာ တို့၊
အို ! စဉ်းစားကြည့်ရင်ရင်မောစရာတွေချည်းပါဘဲ။
ကားအကြောင်းကို ဘာမှ သေသေချာချာ နားမလည်ဘဲ အားကောင်း ရှာကောင်းလေးနဲ့ လုပ်စားနေတဲ့ ပွဲစားတွေလည်း အများကြီး ။ သူတို့ ကတော့ ပွဲခရရင်ပြီးရောဆိုပြီး
ဒီလို ဘာ ဒုက္ခမှ မခံစားရဘဲ အိမ်နေရင်း ဥုံဖွ ! ဆိုပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကားကို ၀ယ်လို့ ရောင်းလို့ ရတယ် ဆိုရင်ကော လူကြီးမင်း စိတ်မ၀င်စားဘူးလား ?
ခေတ်မှီ တိုးတက်လာတဲ့ ခုလို I Tခေတ်ကြီးမှာလူကြီးမင်းတို့အိမ်နေရင်းမပင်မပန်း ဘဲ ဒူးနှံပြီး ၀ယ်ချင်တဲ့ကား ၀ယ် ၊ ရောင်းချင်တဲ့ကားရောင်းလို့ရအောင် ................
SKY LARK Auto က စေတနာ မေတ္တာရှေ့ ထားပြီး စီစဉ်ထားပါတယ် ။
( ၁၅ - ၅ - ၂၀၁၂ ) ကစပြီး ဒီ www.skylark-vivaha.com ပေါ်မှာ SKY LARK Auto ကဏ္ဍကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကားဝယ်ချင်သူများမည်သူမဆို ဤ ကဏ္ဍတွင် အခမဲ့ ၀င်ရောက်၍ မိမိအလိုရှိသောကားကိုရှာဖွေပြီးဘေးပုံ၊ရှေ့ပုံ၊နောက်ပုံ၊ အတွင်းခန်း ၊ အင်ဂျင်ခန်း ၊ နောက်ခန်း ၊ လိုင်စင်သက်တမ်း စသည့် အသေးစိပ် များကို ကြည့်နိုင်ပြီး ကားအကြိုက်တွေ့လို့ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပိုင်ရှင်ကိုတိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်လို့ ရအောင် ပိုင်ရှင်နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို တခါတည်း ဖေါ်ပြ ပေးထားပါတယ်။
အထက် ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကားရောင်းချင်သော လူကြီးမင်းများ 09 73206348 ကို ဆက်လိုက်တာနဲ့လူကြီးမင်း အိမ်သို့ အရောက်လာပြီး လူကြီးမင်း ကားအား ဓာတ် ပုံရိုက်ခြင်း၊ လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို တောင်းယူခြင်း တို့ကို လုပ် မှာဖြစ်ပါတယ် ။ လူကြီးမင်း ကားကြော်ငြာ အား ဓါတ်ပုံ ၊ လိုင်စင်သက်တမ်း လူကြီးမင်း၏ ဖုန်း နံပါတ် စသည့် အချက်အလက် အပြည့်အစုံဖြင့် ဤ websiteပေါ်ရှိ SKY LARK Auto ကဏ္ဍတွင် ( ၆ ) လ ကြော်ငြာ ပေးထားမည် ဖြစ်ပါသည် ။
ထိုသို့ ကြော်ငြာခြင်းအတွက် အက္ခရာ ( ၉ခ/ ) အထိ ယဉ်ပိုင်ရှင်များ ( ၆ )လစာ ကြော်ငြာ အတွက် တစ်စီးလျှင် 18,000 ကျပ်သာပေးရမည် ဖြစ်ပါသည် ။ တစ်လတည်း သာ ကြော်ငြာ လိုသည် ဆိုပါကလည်း ဤနှုန်း အတိုင် 18,000 ကျပ်ပေးရမည် ။ထို အတွက် SKY LARK Auto မှ လူကြီးမင်းအတွက် လက်ဆောင်အဖြစ် ကျပ် ၇၀၀၀ ဖိုး
sky lark ပစ္စည်းများကို လက်ဆောင် ပါ ပြန်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည် ။ အောက်ဖေါ်ပြပါ လက်ဆောင် အမျိုးအစား (၃)မျိုးမှ လူကြီးမင်းကြိုက်နှစ်သက်ရာ တစ်မျိုးကို ကျွန် တော်များအား ဖုန်းဆက်ခေါ်သည့် အခါ လက်ဆောင် (၁)ယူမယ် (၂) ယူမယ် ၊ (၃) ယူမယ် ပြောဆိုကာ တစ်ပါးတည်းမှာ ယူရပါမည် ။
အက္ခရာ ( ၁ဂ/ )အထက်ပိုင်ရှင်များအထက်ပါအတိုင်းကားကြော်ငြာ အတွက် တစ်စီးလျှင် 28,000 ကျပ် ပေးရမည် ဖြစ်ပြီး ၇၀၀၀ ကျပ်ဖိုး လက်ဆောင်ပြန် ရမည် ဖြစ်ပါသည် ။
လူကြီးမင်း ကြိုက်ရာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ရွေးရန်
(1) SKY LARK လက်တွေ့ ကျကျ အသားဖြူ ခရင်မ် ( မျက်နှာလိမ်း ) - ၁ ဘူး
SKY LARK လက်တွေ့ ကျကျ အသားဖြူ ခရင်မ် ( ကိုယ်လိမ်း ) - ၁ ဘူး
SKY LARK လက်တွေ့ ကျကျ အသားဖြူ ခရင်မ် ( ဟိုကြား ဒီကြားလိမ်း ) - ၁ ဘူး
(2) SKY LARK နတ်စည်းစိမ်ခံ ဂျယ်လ် ( အမျိုးသမီးသုံး ) - ၁ ဘူး
(3) SKY LARK ( Power Honey ) ( ယောင်္ကျား အားတိုး ပျားရည် ) - 1 ဘူး
နယ်မှရောင်းချင်သော ကားများ မည်သို့မည်ပုံ လုပ်ရမည်ကို အသေးစိပ် သိလိုပါက 09-73206348 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
အထက်ပါ ပစ္စည်းများ အကြောင်းကို အသေးစိပ် သိလိုပါက Home Page ရှိ SKY LARK Button များကို click လုပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။